Nezvedu - Dalian Rwizi Lake Kubata Tackle Co, Ltd.
Dalian Rwizi Lake Kubata Tackle Co, Ltd. bhizinesi rekubatanidza R&D, dhizaini, kugadzira uye kutengesa. Zvigadzirwa zvedu zvikuru zvinotengeswa kune akasiyana epasi rose-kirasi e-commerce mapuratifomu. Tine makore angangoita gumi ekubudirira mune yekutengesa online. Vatengi vedu vanobva kuNorth America, South America, Europe, Australia, Southeast Asia nedzimwe nyika nematunhu. Zvigadzirwa zvedu zvikuru zvinosanganisira: hove inopenya tsvimbo, hove dzinokwezva, hove hove, Yekuredza mutsara, yekushandisa hove, hove accessories uye zvimwe zvigadzirwa zvehove zvigadzirwa. Kune ese zvigadzirwa zvedu, isu tinokwikwidza zvakanyanya maererano nemutengo uye mashandiro.
Chitsva chigadzirwa kugadzirwa chinhu chakakosha chiitiko kwatiri. Kunyangwe yetsika dhizaini uye ruvara, tinogona kuzvigadzira kusvikira wagutsikana nazvo. Ipa OEM sevhisi
Nekupa zvirinani chigadzirwa mhando, isu tichiri kuchengetedza mutengo padanho rinokwikwidza kune vatengi, kuitira kuti vawane mikana yakawanda uye purofiti mumusika.
Tine mukurumbira wakanaka wekupa hunyanzvi hwemhando yepamusoro uye sevhisi yepamusoro pamitengo inonzwisisika. Basa redu nderekukunda-kukunda mamiriro pakati pevatengi nesu.
Kudzora kwemhando uye zvitupa
Yedu yakura mhando yekudzora timu inoongorora zvigadzirwa zvisati zvatumirwa, kusanganisira kutarisa hunyoro, kuremara, zvisirizvo, kurongedza, nezvimwe mukati mezvigadzirwa. Zvitupa zve ISO, SGS, CE, RTS, nezvimwe.
Sehwambo hwehove. Nyanzvi yekugadzira mazana mashanu emhando dzekunyepedzera, isu tine musangano wekugadzira we 10,000+ mativi emamita uye 180+ vane hunyanzvi vashandi. Isu tinopa vatengi nemitengo yekare-yefekitori uye zvigadzirwa zvemhando yepamusoro, zvese izvi zvinoenderana nematanho epasi rose, uye masampuli anogona kukurumidza kupihwa chero nguva.
Yedu nzira yekupakira inoenderana neyakakodzera mweya kurongedza nzira mukutengeserana kwepasirese. Isu tinoshandisa chemhando yepamusoro mabhegi mabhegi uye epasirese makatoni sezvinhu. Kuti uwane rumwe ruzivo rwakadzama, ndapota titumire ongororo.
Hunhu ndiyo fungidziro yebhizimusi redu repamhepo, rinoteverwa neunyanzvi uye nemitengo yemakwikwi. Isu tinokushandira iwe neyakanakisa mhando uye nekumhanyisa kumhanya, nguva dzose kunoenderana nekutendeseka uye mutengi-centric. Vatengi vanobva pasirese pasirese! Ndapota taura nesu, nokuti tinokugamuchira nomwoyo wose. Ndapota taura nesu, nokuti tinotarisira nomwoyo wose kushandira pamwe newe!